स्वास्थ्यकर्मीबाटै संक्रमणको जोखिम - Khabar Break | Khabar Break
५२५ संक्रमित थपिए
पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर ५ सय २५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म २४ हजार ९ सय ५७ जनामा संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ हजार २५ पुगेको छ। उनीहरू आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। कोरोना संक्रमितमध्ये १६ हजार ८ सय ३७ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। विशेषगरी घनाबस्ती भएका जिल्ला र सहरी क्षेत्रमा संक्रमण बढेको छ। सपिङ मल, रेस्टुरेन्टलगायतका उद्योग व्यवसायमा धेरैको सम्पर्क हुने र जोखिम बढ्ने अवस्था छ। यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी र कर्मचारीलाई आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा १५ सय सक्रमित
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ९ पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार, संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं जिल्लामा १ हजार २ सय ७८ जना छन्। त्यस्तै ललितपुरमा १ सय ९१ र भक्तपुरमा १ सय ९ जना संक्रमित छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमितको संख्या बढेको बताउँछन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सामुदायिक पसल खडा गरेर मास्क र सेनिटाइजरको वितरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मास्क नलगाउने, सेनिटाइजर नबोक्ने र भौतिक दूरी कायम नगर्ने प्रवृत्ति छ। सुरक्षा मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमण वृद्धि भइरहेको हो।’
डा. प्याकुरेल मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताउँछन्। ‘मास्क नलगाएको र सेनिटाइजर नबोकी हिँडेको पाइए जरिवाना गरेर मात्र हुँदैन। जरिवाना तिर्ने र उम्कने गर्छन्। त्यस्तालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ मुलुकका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा १४ हजार ७ सय ६९ जना रहेका छन्।
दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।